I-Apple iya kuvelisa umxholo wayo kubo bonke abaphulaphuli, akukho sini kunye nobundlobongela | Ndisuka mac
I-Apple iya kuvelisa umxholo wayo kubo bonke abaphulaphuli, akukho sini kunye nobundlobongela
Njengoko bendikwazisile izolo, inkulumbuso yeCarpool Karaoke iye yalibaziseka ngenxa kaTim Cook Khange ndibone ngamehlo alungileyo ezinye zeentetho ukuba iindwendwe bezizisebenzisile kwezinye zeziqendu, kunyanzeliswa abavelisi ukuba baphinde bahlanganise izahluko kwakhona, kususwe nawuphi na umxholo onokucaphukisa uluntu.
Olo ntshukumo, into engaqhelekanga xa ucinga ukuba iCarpool Karaoke ayijoliswanga kubaphulaphuli bomntwana, sele isinike ukuba sicinge ngayo Uhlobo lomxholo wobunini ocwangcisiweyo ngu-Apple yenza ngezigidi ezili-1.000 XNUMX eziza kwabelwa olu hambo lutsha kwicandelo lokumamela.
Njengoko kuxeliwe yiBloomberg, Icandelo laseHollywood libonakala ngathi sele linazo izikhokelo ezisisiseko ezicacileyo Ngalo lonke uthotho, uxwebhu okanye ifilimu apho iApple isemva kwayo iya kulawulwa. Kule ngxelo sinokufunda.
I-Apple iceba ukuqala ukwenza umxholo wayo oza kusasaza nge-app ezinikeleyo, kodwa abaphathi abaphambili benkampani abafuni ukuba abantwana babone ingono enye ebekwe ecaleni. Umboniso ngamnye kufuneka ulungele ukubonisa kwiVenkile yeApple. Endaweni yobunqunu, intetho engamanyala kunye nobundlobongela obuninzi namhlanje kumabonwakude, iApple ifuna ii-comedies kunye nemidlalo yeemvakalelo ngendlela "Le yi-US", kunye nemiboniso efana ne "Amabali aMangalisayo," enye yeeprojekthi zamva nje. inkampani ityikitye.
Ngethamsanqa, zombini i-Netflix kunye ne-HBO ziya kuqhubeka zibakhona, ukwenza uhlobo lomxholo ohlala uphumelela kakhulu kwiscreen, kwaye njengomgaqo ngokubanzi ihlala ihamba nolwimi olungcolileyo, ubundlobongela kunye nesondo esithile. Imidlalo yeTrone, iDaredevil, Ukuhamba kwabafileyo, Ukuqhekeka okungalunganga, oothixo baseMelika, Ibali le-American Horror, i-100, Uxinzelelo ... luhlobo lothotho esingasokuze silubone kwinkonzo yeVOD yeApple.
Zilinganisele ekwenzeni ii-comedies kunye needrama isenokuba ayingombono olungileyo ukwenza umxholo wakho ukuba ufuna ukufumana indawo, hayi kwintengiso kuphela, kodwa naphakathi kwabasebenzisi abadla ngokutya umxholo ngolu hlobo lweenkonzo zokusasaza. Inokuthi ekuqaleni ilandele loo mgca, kodwa ukuba iyaqhubeka nale projekthi kwixa elizayo, iApple ayizukukhetha ngaphandle kokuyeka ukunikela ngazo zonke iintlobo zomxholo, kubandakanya noko kwakuza kuthintelwa ngokupheleleyo ekuqaleni.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » I-Apple iya kuvelisa umxholo wayo kubo bonke abaphulaphuli, akukho sini kunye nobundlobongela
Umdlalo weSteamWorld Dig 2 ufika kwivenkile yeMac App